Manchester City oo niyad jab ku ridey riyadii Man United ee sadexda koob sanadkan – SBC
Manchester City oo niyad jab ku ridey riyadii Man United ee sadexda koob sanadkan
Kooxda kubada cagta Manchester City ayaa dharbaaxo ku dhufatey naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin isla markaana ay xifaaltanka xumi ka dhaxeeyo ee Manchester United, ka dib markii gool xarago leh oo uu u dhaliyey xidiga khadka dhexe Yahya Toure.
Ciyaartan oo aheyd wareega Simi final-ka ayay Man City waxay ugu soo gudubtey Final-ka tani oo ah markii ugu horeysay mudo 30 ah oo ay timaado Finalka DF cup-ka oo ah koobka aduunka ugu faca weyn ee kubada cagta.
Daqiiqadii 52-aad ayuu Yaya Toure wuxuu kubad xarago leh dhex dhigay shabaqa kooxda Man United isagoo quusiyey rajadii “Shayaadiinta Cas cas” (Man United) ee sanadkan ay ku doonaysay inay ku qaado 3 koob oo kala ah Premier League, FA Cup ah Champions League.
Isbadal badan oo isku dayey in uu ciyaarta ku sameeyo macalinka Man United Sir Alex oo ka maamulayey ciyaarta dusha sare ee garoonka ka dib markii shan kulan lagu ganaaxay in aanu cagta soo dhigiu doonin seeraha tababarayaasha ka dib markii uu dhaleeceeyey garsoorihii dhexdhexaadinayey ciyaartii Man United ay la lahed naadiga Chelsea horaantii bishani April.
Guuldarada Man United waxaa kaloo u sii raaca iyadoo xidiga khadka dhexe Paul Scholes uu qaatey karaka cas (Red Card) ka dib markii uu qalad ula kac ah uu ku galey xidiga difaaca uga ciyaara Man City ee reer Argentine Pablo Zabaleta.
Man City waxay haatan u fadhidaa Tarbuunka finalka kooxdii maanta ka soo baxda ciyaarta simi final-ka ah ee ka dhacaysa garoonka Wembley ee galbeedka magaalada London.